Amakhaya Oncedo e-Airbnb - Uncedo lwentlekele
Amakhaya Oncedo · Uncedo Ngexesha Lentlekele
Yiba ngumbuki zindwendwe wabantu abafuna izindlu ngokungxamisekileyo
Ukunceda abamelwane emva kwenyikima:
Xa kufika iintlekele, abantu abaninzi bafuna izindlu zokwexeshana. Enoba ngabamelwane abafudisiweyo okanye abantu abanceda ngexesha lentlekele abaziswe kwenye indawo, ikhaya linika abantu indawo efunekayo ukuze bacinge ngoko baza kukwenza emva kwentlekele.
Ababuki zindwendwe banokudlala indima ekhethekileyo endaweni yabo — ngokunikezela nje ngendawo yabo eyongezelelekileyo. Ukususela ngo-2012, iindwendwe zivule iingcango zazo kubantu abachatshazelwe yintlekele emhlabeni wonke.
Indawo yakho ingathuthuzela umntu ngexesha lobunzima.
Ukuze ufake iinkcukacha zakho, uza kucelwa ufake iinkcukacha ezisisiseko ezinjengegama lakho elipheleleyo, ifoto yeenkcukacha nedilesi yeimeyile. Unako nokubhala ukuba ukhuthazwe yintoni ukuze ubuke iindwendwe.
Sixelele ukuba indawoni indlu yakho, bangaphi abantu abanokuhlala kuyo kwaye ifumaneka nini. Ukuba sele ungumbuki zindwendwe, ungakhetha indlu ekhoyo.
Ndisebenzela umbutho onceda abo balahlekelwe ngamakhaya abo ngexesha lentlekele nabazama ukuphila.
Iindwendwe ziza kukuthumelela umyalezo ukuba ziyibona ifaneleka indawo yakho okanye ibe ngumbutho ongenzi nzuzo oqhagamshelana nawe, obhukishela indawo abantu bawo okanye abanceda ngexesha lentlekele, abaninzi kubo ingamavolontiya. Ukuze zikwazi ukubhukisha, iindwendwe kufuneka ziqinisekise ukuba ziyafuduswa. Ungabuza imibuzo, uvumelane namalungiselelo, uze ubeke izinto ozilindeleyo kweli xesha liza kuhlalwa ngaphambi kokugunyanzisa nantoni na.
Amakhaya Oncedo anezinto eziluncedo neempendulo kwimibuzo eqhelekileyo yaye iqela lethu lilapha ukuze likuxhase ukuba unemibuzo njengoko ulindele ukufika kweendwendwe zakho. Kwakhona ungaqhagamshelana nombutho ongenzi nzuzo okanye undwendwe ukuba unemibuzo malunga nokuhlala kwabo okuzayo.
ABANTU ABACHATSHAZELWE NGQO
Njengombuki zindwendwe, unokuva kubantu abahlukahlukeneyo abachatshazelwe yintlekele. Aba ingangabantu abafudisiweyo okanye amalungu entsapho, abantu abasindileyo abafuna ukuba secaleni kwabo njengoko befumana unyango.
ABASEBENZI ABANCEDAYO XA KWEHLE INTLEKELE
Sisebenzisana nemibutho yehlabathini lonke ukunceda ngamakhaya okwexeshana abantu ababekwe kwezinye indawo ukuze bancede emva kwentlekele. Oku kungaquka abantu bokuqala ukuya kwindawo yentlekele, amavolontiya nabasebenzi bemibutho engenzi nzuzo.
Kufuneka nje unike iindwendwe indawo ezenza zizive zamkelekile uze uphendule nayiphi na imibuzo ezinayo.
Indlu yonke okanye iflethi
Izinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko kunye nezinto zokuhlamba
Ukufumaneka iintsuku ezimbini okanye ngaphezulu ngokulandelelanayo